तिमी | मझेरी डट कम
ks — Sat, 10/13/2012 - 12:16
हेर तिमी र तिम्रा लागि भनेर मैले जिन्दगीका एक दशकका शिशिर र बसन्तहरू तिम्रै साथमा बिताए । तिमीलाई स्याहार गरेँ, तिम्रा प्रत्येक पलमा साथ दिएँ, तिमीलाई सँधै मायाँ गरे, कहिल्यै तिम्रो साथ छोडिन । अहिले समय बदलिएछ । किनकि म तिमीसँग छैन म तिमीभन्दा टाढा पुगेको छु ।
मानिस परिस्थितिको दास नै हो त्यसैले त्यही परिस्थितिको कारणले गर्दा म अहिले तिमीभन्दा टाढा पुगेको छु । मेरो रहर होइन बाध्यताले गर्दा तर दुःख लागेको छ । तिमी सँगै अहिलेसम्म नहुँदा । किनकि तिमी पश्चिममा छौ म पूर्वमा छु । आजसम्म हेरे तिमी सँग भेट हुन नपाएको पनि दुई महिना बितिसकेछ । तर तिम्रा आफन्त र अभिभावक कसैले पनि मेरो आवश्यकता ठानेनन वा किन यादसम्म पनि गर्न चाहेका छैनन ।
म तिमीसँग टाढा हुन चाहेको हैन । तर केही समय म तिमीसँग बस्न नसक्ने भएकाले हिडेको थिएँ । तर आजसम्म न त तिमीले सम्झने प्रयास गरेका छौ न त तिम्रा अभिभावकले नै । किन यसरी सँगैसँगै सहकार्य गर्दै यतिका वर्ष बिताएको मलाई सम्झन नचाहेको हो मैले बुझ्न सकिन । किन यस्तो भयो अब तिमी नै भन न !
सद्भाव र सिर्जनासहितको कलासाहित्य यात्रा
महाकवि देवकोटाः शोकका समाचार र सम्पादकीयहरू
अनुसन्धानात्मक रिपोर्टिङ सँगालो
मजदुर गीत (लुटी खाने बस्दछ डकारी)
नेपालका धन्वन्तरि मन्दिर
संसारको सृष्टिको कथा
एउटा नेता चाहियो
राजविराजमा मोती जयन्ती मनाइयो
चोखो माया दि सके ,अबिश्वाशको भाडो भर्दिन म
प्राध्याक डा. नारायणप्रसाद खनालको ‘नागपञ्चमी’ नियाल्दा
प्रादेशिक नेपाल र यसका सम्भाव्य प्रभावहरू
साहित्यको बजारवाद हुनु पर्छ तर बजारवादले साहित्यलाई प्रभाव पार्नु हुँदैन - पेशल आचार्य
जे भए पनि कुरा त दाइजो नै त हो
क्यालगरीले साहित्य गोष्ठी गरी भानु जयन्ती मनायो
प्रभाव र विज्ञापनले कविता श्रवण (वैरागी काइँलाको एकल कविता वाचन)